ता’लिबानको डरले अफगानिस्तानको आकाश नछोई अमेरिका गयो मोदी सवार विमान – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > ता’लिबानको डरले अफगानिस्तानको आकाश नछोई अमेरिका गयो मोदी सवार विमान
ता’लिबानको डरले अफगानिस्तानको आकाश नछोई अमेरिका गयो मोदी सवार विमान
admin September 23, 2021 अन्तराष्ट्रिय, समाचार 0
एजेन्सी । अमेरिका भ्रमणका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुधबार विमानमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। तर उनको विमान अफगानिस्तानको आकाश भएर गएन।
सुरक्षाका कारण यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतबाट सीधै अमेरिका उडानका लागि पास्कितानको हवाई मार्ग प्रयोग गरेका हुन्। अफगानिस्तान क’ब्जा गरेपछि तालिबानले गत अगस्ट १६ देखि आफ्नो हवाई मार्ग (आकाश) मा व्यावसायिक उडान प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
त्यसपछि भारत सरकारले आफ्ना हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई अफगानिस्तानको हवाई मार्ग प्रयोग नगर्न सूचना जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग विशेष विमानमा एनएसआई अजित डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगलासहित सरकारका उच्च अधिकारी अमेरिका गएका छन्। सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीको उडानका लागि पाकिस्तानको हवाई क्षेत्र प्रयोगका लागि अनुमति मागिएको थियो।
खासमा भारतबाट अमेरिका जाने हवाई रुट पाकिस्तान र अफगानिस्तान भएर जान्छ। यसपछि विमान ताजिकिस्तानको सीमास्थित नर्थ एटलान्टिक महासागरमाथि भएर उड्छ। प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष विमान नयाँ दिल्लीबाट सीधै अमेरिका उड्दा १५ घण्टा लाग्छ। तर अफगानिस्तानको आकाश प्रयोग नगर्दा केही समय बढी लाग्नेछ।
गुरु बृहस्पति र बिष्णुको प्रिय दिन बिहीबार यी कामगर्नु दरिद्रता नाशहुन्छ, भाग्य बढ्छ !
देउवाका प्रिय भनिएका जयवहादुरले चन्द एआइजीवाट राजिनामा दिएपछि लेखे यस्तो स्ट्याटस
नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै लकडाउन दुई हप्ता लम्ब्याउने सरकारको तयारी
पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नया सालकै दिन यस्तो भनेपछि सामाजिक संजालमा भयो भाईरल !
बिदेशबाट श्रीमान घर आउँदै गर्दा श्रीमति घर छो,डेर बे,पत्ता,कमाएको सबै स्वा,हा !
जि’उँदै सर्प नाकबाट घुसारेर मुखबाट निकाल्ने यी युवती (भिडियो सहित)
बाहिरियो साउदीबाट नेपाली युवाको यस्तो दर्द’नाक भिडियो,बचाउनुस भन्दै मागे गु’हार (भिडियो हेर्नुस्)
यी ग’र्भवती महिला, जसको आमा र दाई मिलेर गरे ह’त्या